Fampiofanana momba ny fambolena mandrobona ao amin'ny tanàna 99 • Yurie BSF
Fampiofanana momba ny fambolena mandrobona ao amin'ny tanàna 99
Yurie | Feb 16, 2019 | Fampiofanana momba ny fambolena tsy fahampian-tsakafo
E training ++ Modern BSF cultivation without training
Ny BSF Ny fambolena modely tsy misy fofona dia hany fampiofanana amin'ny fiofanana ++. izay manome antoka anao hahomby. Ny fampiofanana rehetra fampianarana fampianarana fampianarana maggot cultivate Azonao atao ny maka azy amin'ny fampiharana ny Yurie BSF ao amin'ny PlayStore. Fampiofanana ny fambolena BSF miaraka amin'ny Yurie BSF Afaka misafidy ny toerana fanao akaiky indrindra ao an-tanànanao ianao. Noho ny fampiofanana Bibikely hafakely ++ Ianao koa dia manan-jo hampihatra any amin'ny toeram-pambolena Yurie BSF miparitaka amin'ny tanàna hafa ao 99 manerana an'i Indonezia. Fampiofanana biby fiompy BSF izay tsy dia mana-kery ary efa voavaha tsara.
Ny fizotry ny fianarana mahazendana tsy misy aretina
Manomboka misoratra anarana ianao
Dia homena anao ny fampiharana ny Yurie BSF amin'ny PlayStore
Hanasa anao koa ianao hiditra ao amin'ny kolontsaina miafina FB tsy misy fofona
Ny famindrana entana ho an'ny fampiharana dia mandefa 2x24 ora aorian'ny fisoratana anarana
Ny famindrana ny voa, ny atody lava dia alaina araka ny fahavononana
Manan-jo hanao zaridaina any amin'ny toeram-pambolena Yurie BSF ianao
Ny torolalana aorian'ny fampiharana saha dia tanterahana mandra-pahombiazanao
Alohan'ny hidirana dia tsy maintsy voasoratra amin'ny alalan'ny fandefasana porofon'ny fandoavana ny saram-pianarana amin'ny alalan'ny famindrana ny banky BRI.
Ary dia hangatahana karatra ID misy ny rakitra ara-panjakana ianao.
Rehefa avy nandefa porofo momba ny famindrana ianao, dia hahazo tenimiafina manokana hanokatra ny fangatahana Yurie BSF ao amin'ny trano famakiam-boky.
Ao amin'ny fampiharana ny Yurie BSF dia efa vonona ny playstation:
Boky torolàlana telo ho an'ny teoria sy ny fampiharana
Fampianarana momba ny fambolena fingotra tsy dia mamokatra
Formula dia manamboatra pasta maitso
Fampiharana volom-borona mirakitra solika (POC) ho an'ny ravina sy voankazo isan-karazany
Ny fampiharana marina momba ny solitany
Rehefa mahazo ny tenimiafin'ny tenimiafina ianao, dia mila manokatra fotsiny ianao, maka download ary mijery ny horonan-tsarimihetsika na aiza na aiza raha mbola misy fifandraisana aterineto.
Ny fampiharana ny Yurie BSF dia tena goavana satria misy lahatsary sy antontan-kevitra marobe ao anatiny, saingy miaraka amin'ny teknolojia avo lenta, ny vokatra farany amin'ny fampiharana dia lasa maivana amin'ny 16MB.
Nomaninay ity tranobe ity mba hahafahana mandefa ny Yurie BSF amin'ny alàlan'ny karazana finday taloha.
Miaraha amin'ny Group Secret
Ny dingana manaraka anao dia asaina manokana hiditra ao amin'ny fb ny tsiambaratelon'ny fambolena BSF ankehitriny tsy misy fofona.
Ao amin'ny FB ny vondrona miafina amin'ny fambolena BSF amin'izao fotoana izao tsy misy fofona dia mizara ho telo, izany hoe
Ao amin'io vondrona io dia hihaona amin'ireo namana Yurie BSF manerana an'i Indonezia ianao. Nizara ny traikefan'izy ireo izy ireo ary nanangana vondrom-piarahamonina tany amin'ny tanànany.
Azafady ifanakalozy hevitra amin'ny adab. Hanao fihetsiketsehana mafy amin'ny sangisangy "tebiteby" izay tsy misy isika ary zavatra tsy misy ifandraisany amin'ny ezaka amin'ny fananganana vokatra tsara maggot BSF tsy misy fofona.
Ity fizarana ity dia mikendry ny hahatonga ny namana Yurie BSF hifantoka bebe kokoa amin'ny fanao isan'andro amin'ny fambolena maggot.
Eo amin'ny ambaratonga tsirairay dia hotarihin'ny mpanoro hevitra iray na roa izay nahomby. Noho izany, ny vokatry ny fampiharana dia tsy ny fizahan-toetra sy ny hadisoana diso.
Ao amin'ny fonosana tsirairay nividianana, dia homena fitaovana ho an'ny fanao manokana ataonao ao an-trano ianao, anisan'izany ny ahitra, atody, olitra ary fitaovana fanohanana hafa.
Ity fonosana ity dia mizara ho sokajy roa, zavatra tsy mananaina ary zavatra velona. Ny sokajy tsy manan'aina dia mandefa 2 x 24 ora aorian'ny nahazoanay porofo ny famindrana,
Ireo karazan-tsakafon'ny zavamaniry toy ny voa, ny atody, ny larvae sns ... dia alefa araka ny fahavononanao. Natao izany mba hahafahana mandefa ireo zavatra mivantana rehefa vita ny fahavononana.
Ny porofon'ny fanaterana entana avy amin'ny serivisy misafidy izay nofinidintsika amin'ny endriky ny vola azonao hanamarinana ny toerana misy ny sambo.
Rehefa afaka mandefa ny fampiharana ary mianatra amin'ny tenanao koa dia miditra amin'ny vondrona, tokony hianatra mivantana amin'ny iray amin'ireo toeram-pambolena Yurie BSF izay miparitaka mihoatra ny tanàna 99 manerana an'i Indonezia.
Hisy baomba ataon'ireo mpanolo-tsaina izay efa voaofana ary nahazo mari-pankasitrahana amin'ny fambolena BSF amin'izao fotoana izao tsy misy fofona. Izany no hianaranao zavatra mitovy.
Azo antoka fa tombony ho anao ny mampihatra mivantana any amin'ny tanàna akaiky. Satria ny akaiky dia akaiky, tsy mila mandoa saram-betsaka ho an'ny fitaterana, ny tapakila amin'ny sidina, ny fialan-tsasatra ny vidin-tsakafo sy ny fotoana dia flexibilité ihany koa.
Mitadiava fialofana 10 km25 km50 km100 km200 km500 km
Miantoka ny fahombiazana
Aorian'ity dingana manaraka ity dia mbola hitari-dalana foana ianao mandra-pahatonga izany.
Ny maggoto dia hovidin'ny Yurie BSf ho an'ny Rp7.000 / kg. noho izany dia tsy mila manahy momba ny fitadiavana indray ny fivarotana.
Fa raha tsy te-hivarotra amin'i Yurie ianao dia tsy misy dikany izany. Afaka misafidy izay tianao hatao ianao mivarotra maggot- ny bug.
Ny famokarana akorabato dia manangom-bozaka be. Raha mivarotra amindry ny Yurie BSF ianao.
Manana vola fanampiana avy amin'ny Rp100.000.000 izahay, - mba hampivelatra ny famokarana maggot.
Afaka mifantoka mivantana amin'ny mpiofana matihanina
Ny fianarana miaraka amin'ny fiofanana sy ivelan'ny aterineto (fikarakarana zaridaina) dia mety amin'ny fotoana rehetra na aiza na aiza misy anao. Azonao atao aza ny mandefa ny lohahevitra.
Ny fomba fambolena fingotra manala baraka dia nosedraina tamim-pahombiazana ary nahafinaritra an'ireo namana Yurie BSF an'arivony
Ny fitaovana fambolena dia azo havaozina araka izay ilaina
Fanehoana fankasitrahana avy amin'ireo mpandihy mpianatra amin'ny endrika endrika fijoroana vavolombelona sy fijoroana vavolombelona marina izay azonao jerena LIVE ao amin'ny fantsona YouTube Yurie BSF.
Inona no vidin'ny pansy fanofanana?
E training training tsy mandoa na maimaim-poana, ny vola rehetra omenareo dia ny fonosana. Ny vidin'ny fonosana dia avy amin'ny Rp100.000-Rp4.000.000 arakaraka ny fonosana nofidinao.
Mety tsara ve ny manomboka?
Tena mety. Satria ny fitaovana fitarihana boky ho an'ny horonan-tsary sy horonan-tsary dia natao tsikelikely avy amin'ny zero mba hahombiazana. Tsy maintsy misafidy fotsiny ny fampiofanana e + ++ fampiofanana araka izay ilaina.
Azo alaina indray ve ny fandoavam-bola?
No. Ny fonosan'ireo entana novidina dia mifandraika amin'ny loha-hevitra amin'ny zavatra hividiananao.
Azo atao ve ny mandefa lesona?
Eny, azonao atao ny maka ny raki-daza.
Mifandraisa miaraka amin'ny 2000 ++ hafa!
Mifandraisa aminay tel / WA 0812-2105-2808
Fiarahabana SAVE sy CLEAN MY INDONESIAN
Phone: Fax: karazana verinia: